Zvishandiso Fekitori | China Zvishandiso Vagadziri, Vatengesi
Iyo Yakarerekera Sieving Solid-mvura Separator inonyanya kubata marara nemvura yemukati inopfuura 90%, iri mhando nyowani yemhando yepamusoro michina inonyanya kushandiswa kusefa mupfudze senge nguruve, mhou, huku, hwai uye marudzi ese ezvipfuyo zvakakura uye zviri pakati nepakati. Iyo zvakare inogona kushandiswa mukushomeka kwemvura yakawanda kwazvo yemukati memvura, senge bhinzi curd masara, uye hombe yemvura yezvirimwa zvewaini.
Michina Imwe Cylinder Kuomesa Machine Inoshandiswa zvakanyanya kuomesa zvinhu mumaindasitiri senge simende, yangu, kuvaka, kemikari, chikafu, komputa fetiraiza, nezvimwe.
Muchina wedhiramu unotonhorera muchina unofanirwa kugadzirwa uye kushandiswa mune yakasanganiswa fetiraiza yekugadzira mutsara kana NPK remubatanidzwa fetereza yekugadzira tambo kupedzisa yakakwana fotereza kugadzira maitiro. IyoFertilizer Pellets inotonhora Machine Kazhinji kutevera kuomesa muitiro kuderedza mwando uye kuwedzera PARTICIPLE simba apo achideredza PARTICIPLE tembiricha.
Iyo Kuisa & Kudyisa Muchina inoshandiswa seye yakasvibirira hopper panguva yekugadzirisa zvinhu uye inokodzera forklift rori kurodha zvinhu. Iyo yunifomu uye inoramba ichiyerera kwete chete kuchengetedza mari yevashandi, asi zvakare kugadzirisa basa kushanda.
Iyo Mmhedziso Hoppers Single Weigh Static Organic & Remubatanidzwa Fertilizer Batching Machine inonyanya kukodzera kusanganisa, batching uye kudyisa kwe3-8 mhando dzezvinhu. Iyo sisitimu inodzorwa otomatiki nekombuta chiyero. Iyo pneumatic vharuvhu inoshandiswa kudzora zvinhu zvinopihwa mune yakanyanya bin. Izvo zvinhu zvakasanganiswa mubhaini rekusanganisa uye zvinotumirwa zvoga nebhandi rinotakura.
Iyo Vertical Disc Kusanganisa Fudzaer Muchina inoshandiswa kuenzanisa zvakaenzana kupa iyo mbishi zvigadzirwa kune anopfuura maviri michina mune yekugadzira fetiraiza maitiro. Iine hunhu hwecompact dhizaini, yunifomu kudyisa uye kutaridzika chitarisiko Kune anopfuura maviri madhiri ekuburitsa pazasi peiyo disc, izvo zvinoita kuti kuburitsa kuve nyore.
Iyo Inotakurika Mobile Belt Conveyor isingaremi uye inotakurika, kufamba kunoshanda mukutakura kwakawanda, kutakura zvekutakura uye dzimwe nguva, sutu kune dzakasiyana zviitiko, uye nyore kugadzirisa.